Ungazifihla njani ngokukhawuleza okanye ubonise iifayile kwiMacOS ngonqumlo lwebhodi yezitshixo | Ndisuka mac
Ungazifihla njani ngokukhawuleza okanye ubonise iifayile kwi-macOS ngonqumlo lwebhodi yezitshixo
Njengomgaqo ngokubanzi, iinkqubo zokusebenza zifihla uthotho lweefayile ngesizathu esithile, ezingezizo ngaphandle kokuzama ukuthintela abasebenzisi ukuba bangene kuzo kunye nenkqubo yokusebenza ekubeni yonakale, kodwa ayisosizathu sodwa. Ukuba sabelana ngeMac nabanye abantu kwaye asinayo inkqubo yolawulo lomsebenzisi, sinomdla wokufihla ezinye iifayile.
Ukuba sihlala sinyanzelwa ukuba sisebenze nezi ntlobo zeefayile, mhlawumbi udiniwe kukusebenzisa imenyu ephezulu ukufihla kwaye ubonise iifayile zenkqubo ezifihliweyo. Ngethamsanqa i-macOS isinika ukufikelela ngokuthe ngqo ngokudibanisa amaqhosha ukuze sikwazi ukufihla okanye ukubonisa ezi ntlobo zeefayile.
Ukuze usebenzise le ndlela, kufuneka ikopi yethu ye-macOS ilingane okanye ibe nkulu kune-MacOS Sierra, ukuze nayiphi na inguqulelo ephezulu iya kuhambelana nale ndlela imfutshane. Ukuba umbono wethu ayikokufihla iifayile ukuze kungabikho mntu unokufikelela, akufuneki sizame ukufikelela kwezi ndidi zeefayile, kuba zigcinelwe abasebenzisi abaphambili, kuba njengoko benditshilo ngasentla, naluphi na uhlengahlengiso lunokuchaphazela ukusebenza kwethu iqela.
Veza / Fihla iifayile ezifihliweyo kwi-macOS
Njengalo naluphi na udibaniso lwebhodi yezitshixo esivumela ukuba sikhawulezise umsebenzi ofumanekayo kwiimenyu, olu dibaniso lwezitshixo lufuna ucinezelo olulandelelanayo lwezitshixo Shift + Command +.
Ewe, indibaniselwano yesitshixo ifuna ukuba sicinezele amaqhosha eShift, isitshixo soMyalelo. kunye nenqaku. Njengoko sisenza la manyano ungundoqo, zonke iifayile ezifihliweyo kwi-Finder iya kuboniswa okanye ifihlwe kuxhomekeke kwisimo apho zikhona xa siqhuba inkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ungazifihla njani ngokukhawuleza okanye ubonise iifayile kwi-macOS ngonqumlo lwebhodi yezitshixo
Ewe sele sinazo iziseko zomntu wesithathu wokuqala ukuze iPod yasekhaya ingakroli itafile
I-Apple ivuselela "iCarpool Karaoke" kwaye kuya kubakho ixesha lesibini